Ivotoerana fikarohana lehibe 5
1. Institut Institute of Silicon Research, Akademia Shinoa momba ny siansa
2. Ivotoerana teknolojika momba ny teknolojia momba ny teknolojia oksidaina ao amin'ny faritany Henan
4. Zhengzhou Fine Ceramic Engineering Center
Misy ny efitrano fandinihana simika, efitrano fizahan-toetra ny fizika, laboratoara fanodinana ary laboratoara fampiharana. Rafitra fikarohana sy fampandrosoana miaraka amina toetran'ny alumina marobe no foronina miaraka amin'ny fitaovana sy fomba feno.
Fitaovana fanandramana R&D mandroso
1. Mikraoskaopy elektronika nizahana elektronika Japon
2. Alemana Sympatec Laser Partizer Sizer
3. Mpanadihady momba ny haingam-pandeha haingam-pandeha
4. Masinina miolakolaka keramika
5. 1700 ℃ fitsapana herinaratra fandoroana keramika
6. metatra matevina mandeha ho azy
Fitaovana fikarohana siantifika 6 lehibe
1. Institute of Ceramics any Shanghai, Akademia siansa momba ny siansa
3. Ivon-toeram-pikarohana fikarohana momba an'i Abrasives sy Grinding
4. Sekolin'ny injenieran'ny fitaovana, University of Technology Henan
5. Institiota fikarohana an'i shhanghai baosteel
Ny fiaraha-miasa amin'ireo sehatra ireo dia mitarika ny fampandrosoana ny indostria ary manome fanohanana matanjaka ara-teknolojia ho an'ny fampandrosoana maharitra ny YUFA Group.
Manizingizina hatrany ny YUFA fa ny vokatra rehetra dia azo amidy ihany rehefa avy nandalo ny fanaraha-maso kalitao. Ny YUFA dia manana laboratoara fanaraha-maso kalitao matihanina sy mpiasa manara-penitra. Manomboka amin'ny akora miditra amin'ny ozinina, fandefasana lafaoro, vokatra vita mialoha, fanosehana, hatramin'ny vokatra farany vita amin'ny orinasa, YUFA dia manao fizahana arakaraka ny dosie samihafa ary ampiarahina amin'ny fenitra fanaraha-maso mifanandrify amin'ny orinasa. Ny isan'ny fanaraha-maso farafahakeliny dia in-10, ary ny ambony indrindra dia mety mihoatra ny 40 ny fizahana.
Fanamarihana: rehefa mihoatra ny 20 taonina ny batch, ny santionany dia ataon'ny andiany.
Ny vokatra any ivelan'ny orinasa dia tokony hojerena arakaraka ny fenitra. Raha mahafeno ny fepetra ara-teknika ny entana rehetra dia mahafeno fepetra ny andiana vokatra. Mandritra ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso kalitao, ny vokatra nozahana dia mizara ho isan-karazany haben'ny zana-kazo. Safidio tsy an-kanavaka ny haben'ny sombin-kaonty ho azy ireo.